Ch 2 Matthew – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Matthew / Ch 2 Matthew
2:1 Oo sidaas daraaddeed, Goortii Ciise ku dhashay Beytlaxam Yahuudah, waagii Herodos boqorkii, bal eeg, Niman xigmad xagga bari ka timid Yeruusaalem,
2:2 oo wuxuu ku yidhi: "Xaggee buu joogaa boqorka Yuhuudda ee dhashay? Waayo, waxaannu aragnay xiddiga bari, oo waxaan u imid inaan isaga u Sujuudaan. "
2:3 Haddaba boqorkii Herodos, maqalka, waxaa dhibtay, iyo reer Yeruusaalem oo dhan oo isaga la.
2:4 Oo intuu isu ururiyey madaxdiisa oo dhan soo wadaaddadii, iyo culimmadii dadka oo dhan, ayuu kula tashaday sidii ay u meeshii Masiixu ku dhalan lahaa.
2:5 Oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen: "In Beytlaxamtii Yahuudiya,. Waayo, sidaas ayaa lagu nebigii u qoray:
2:6 'Adiguna, Beytlaxam, oo dalka Yahuudah u, waa wax ugu yaraan ka mid ah amiirradii dalka Yahuudah. Waayo, tan aad u soo bixi doonaan oo taliye ahaa, yaa hanuunin doonaa dadka Israa'iil. ' "
2:7 Markaasuu Herodos, aamusnaan wacaya maydku, aad u iyaga ka bartay markii ugu markii xiddigtii iyaga u muuqday.
2:8 Oo diraya galay Beytlaxam, ayuu yiri: "Taga oo su'aalo ku saabsan wiilka weydii. Oo markay aad u helay, soo sheegaan dib ii, sidaas oo kale ayaan in, aad, waxaa laga yaabaa in ay yimaadaan oo isaga u Sujuudaan. "
2:9 Oo markuu boqorkii maqleen, ayay ka tageen. Oo bal eeg, Xiddiga kooxda in ay bari ka arkeen iyaguu hor kacay, iyo tan iyo xataa, yimid, weli taagnaa kor meeshii ilmuhu joogay,.
2:10 Markaasuu, maxaa yeelay, xiddigtii, ay farxi by farxad aad u weyn.
2:11 Goortay guriga, waxayna ka heleen wiilka la hooyadiis Maryan u. Oo sidaas daraaddeed, Sujuudi dhacaya, waxay isaga u jeclaa. Oo khasnadahoodii fureen, waxay isaga u dhiibeen hadiyado: dahab, fooxa, iyo malmal.
2:12 Oo markuu jawaab hurdada inay inaanay Herodos ku noqon helay, ayay dib jid kaluu maray by in ay gobolka u gaar ah.
2:13 Oo ka dib markii ay iska baxeen, bal eeg, Angel Rabbiga ayaa u muuqday in hurdo Yuusuf, oo wuxuu ku yidhi: "Kac, oo waxaad soo qaaddaa wiilka iyo hooyadiis, oo Masar u carar. Oo halkaas joogo ilaa aan kuu sheegi. Waayo, waxaa dhici doona in Herodos u doondooni doonaa wiilka inay dilaan. "
2:14 Iyo kor u hesho, wuxuu qaaday wiil iyo hooyadiis habeenkii, oo ku noqday Masar galay.
2:15 Oo isna waxaa ku hadhay, ilaa dhimashadii Herodos, si ay u noqoto wixii lagaga dhex hadlay Rabbiga dhex hadlay nebi, oo wuxuu ku yidhi: "Out of Masar, Wiilkayga ayaan u yeedhay. "
2:16 Markaasuu Herodos, markay arkeen in uu la siri maydku, aad buu ugu cadhooday. Oo sidaas daraaddeed ayuu u soo diray in ay dilaan dhamaan wiilashii ka soo joogay Beytlaxam, iyo meelaha u dhow oo dhan oo ay, ka laba sano jir iyo ka yar, sida wakhtigii uu ka bartay by su'aalo maydku.
2:17 Markaas wixii lagaga dhex hadlay nebi Yeremyaah waxaa rumoobay, oo wuxuu ku yidhi:
2:18 "Cod baa Raamaah laga maqlay ayaa, Oohin iyo baroor weyn: Rachel oohin wiilasheedii. Oo iyana wuu diiday in la tacsiyeeyeen, maxaa yeelay, iyagu mar dambe ma ay ahaayeen. "
2:19 Markaasuu, when Herod had passed away, bal eeg, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,
2:20 oo wuxuu ku yidhi: "Kac, oo waxaad soo qaaddaa wiilka iyo hooyadiis, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.”
2:21 Oo anigoo, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel.
2:22 Markaasuu, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee.